'' သကျသခေံ '' များအတွက်လူသတ်မှု Derk Wiersum နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကို၏စစ်မှန်သောဘာလဲ? မာတင် Vrijland
'' သကျသခေံ '' များအတွက်လူသတ်မှု Derk Wiersum နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကို၏စစ်မှန်သောဘာလဲ?
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	18 စက်တင်ဘာလ 2019 အပေါ်	• 26 မှတ်ချက်
In ဤဆောင်းပါးတွင် ငါဥပဒေပြဌာန်းထိုသက်သေကို '' ၏နိယာမပြွတ်သိပ်ခဲ့ကြောင်းဘယ်လို Willem Holleeder Heineken ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်လူသတ်မှုသူ့ကိုကကျူးလွန်, PSYOP ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဖော်ပြခဲ့သည်။ (Holleeder PSYOP ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်?) ထိုသက်သေကိုထိန်းချုပ်အခြေခံအားဖြင့် (ထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတဆင့် '' အမည်မသိသက်သေကိုခြိမ်းခြောက် ') ထိုသက်သေကိုပင်အမည်မသိဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်ထိုသို့လိုလားသူပြည်နယ်မည်သူမဆို, ဆက်လက်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ "Derk Wiersum on" ဒါကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယခုအမည်ဝှက်ရှေ့နေခုခံကာကွယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုသို့ကြွလာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်သည်စီရင်ချက်ချဘို့ကအဓိကသကျသခေံနှင့်အတူအမည်မသိရှေ့နေဖြင့်ကာကွယ်ထားရရှိနိုင်အမည်မသိသက်သေရှိသည်။ တိုတိုမှာပြည်နယ်အရက်ဆိုင်နောက်ကွယ်မှအထောက်အထားမရှိဘဲမည်သူမဆိုရနိုင်။
ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးအလွန်အတိုချုပ်အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတိရစ္ဆာန်ရိုးရှင်းစွာ၎င်း၏နာမဖြင့်သမုတ်သောရပါမည်။ အစောပိုင်းကယနေ့, ငါ့ Facebook မှာအချိန်ဇယားအပေါ်ငါ Dirk Wiersum တကယ်တည်ရှိသို့မဟုတ်ငါတို့သည်နက်အတုဇာတ်ကောင်ခွင့်ပြုရှိမရှိလျှင်အံ့ဩကြ၏။ ဒါဟာအိမ်နီးချင်းများနှင့်အသိအကျွမ်းလည်းတူညီသောနည်းပညာ (နက်ရှိုင်းသောသမိုင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာ profile များကိုဖန်တီးအတုမှတဆင့် AI အများနှင့်အသင်းတော်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့အသံဖမ်းမျက်နှာပေါ်မှာအမှန်တကယ်ချောင်းကို) သုံးပြီးအတုအယောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းခံရလိမ့်မယ်။ သငျသညျဝေးလွန်းမယ်ထင်ပါသလား ငါနားလည်ပေမယ့်နည်းပညာကိုဝေးလွန်းတတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သောဆရာယောဟနျက de Mol (ထို ANP နှင့် Talpa ၏ဘီလျံနာပိုင်ရှင်) အဖြစ်လူမျိုး၏လက်၌မီဒီယာများနှင့်မီဒီယာကနေပုံတစ်ပုံနဲ့အသံထဲမှာတွေ့မြင်အရာအားလုံး။ မီဒီယာအတုသတင်း generate အားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမသက်သေပြဘို့အဲဒီမှာပေး။ သို့သျောလညျးသငျသညျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်နိုင် ဤဆောင်းပါးတွင် အဖြစ်ကောင်းစွာဖြစ်နိုင်သောအရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်ကြိမ်။
၏သင်တန်းလူမှုမီဒီယာမှတ်ချက်များကိုလည်းအားလုံးအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှုပေးပို့တူသောမှတ်ချက်များနှင့်အတူကိုတုံ့ပြန်ပရိုဖိုင်များ (အစစ်အမှန်သို့မဟုတ်အတုနက်ရှိုင်း?): "။ ပြောတစ်ခုခုကျန်ကြွင်းများအတွက်အဓမ္မဖြစ်ပါတယ်" ဒါဟာခက်ခဲသက်သေအထောက်အထားရှိလျှင်တစ်စုံတစ်ဦးသေကြောင်းကိုငြင်းပယ်ဖို့အမှန်ပင်အဓမ္မဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ပိုပြီးဒေါသထွက်ဆယ်စုနှစ်များကပါလျှင်၎င်းသည်ပါလိမ့်မယ် ကစား PsyOps ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်သို့ငါပြုပါကဤသို့မှသာအမှန်တကယ်ကြောင်းမြင်ကွင်းကိုယူငါ့ကိုခြင်းမရှိဘဲ, ဖြစ်နိုင်ချေမြှင့်သည်။
မည်သည့်အဖြစ်အပျက်အတွက်, ဤကိစ္စတွင်ယင်းသို့ဿုံ fit ပြဿနာ, တုံ့ပြန်မှု, ဖြေရှင်းချက် အခွခေံမူ, အရာအတွက် Self-created ပြဿနာနှင့် evoked တုံ့ပြန်မှု, တင်းကျပ်သောဥပဒေများအဘို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှဦးဆောင်။ created ကြသူအတူတူလူတို့အားဒါကတင်းကျပ်ဥပဒေပြဌာန်းအားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အုန်းအုန်းသဲသဲမေ့လျော့ဖြစ်လျှင်, အနာဂတ်အတွက်အလွန်ခက်ခဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြည်နယ်မကြာမီအမှန်တကယ်အရက်ဆိုင်နောက်ကွယ်မှမဆိုအတိုက်အခံရရှိမည်ဆိုပါကတစ်ဦးလည်းမရှိခဲ့ချေလူတစ်ဦး ( "အမည်မသိသကျသခေံ") (ထိုအဆုံးအဖြတ်သက်သေကိုရည်မှတ် Holleeder ကိစ္စတွင်ကြည့်ပါ) အဆုံးအဖြတ်သက်သေခံချက်ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကာကွယ်ရေးရှေ့နေထို့ကြောင့် (အနာဂတ်၌တတ်နိုင်သမျှအမည်မသိကဲ့သို့) မတည်ရှိပါဘူး, ဒါကြောင့်မည်သူမဆိုဘားနောက်ကွယ်မှတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ မဆိုအတိုက်အခံသို့မဟုတ် gepsychiatriseerd စစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်တစ်မှားယွင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်အားဖြင့်ပိတ်မိနေရလိမ့်မည်။
ကိတ်မုန့်ပေါ် icing အဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်စီးနင်းမှုခွင့်ပြုတဲ့ဥပဒရှိရလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အမှန်ပင်အားလုံးအမ်စတာဒမ်အပေါင်းတို့၌အိမ်များအတွက်အိပ်ရာအောက်မှာလဲလျောင်းသောသူတို့အားလက်နက်များမြန်ဆန်ကို clean up ကိုသွားရမယ်! ဤသည်နှင့်အပေါ်မသှားနိုငျနိုငျပါသညျ!
အဆိုပါဂျာကင်အင်္ကျီအန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးအပေါ် DNA ကိုမိုက်ကယ် Panhuis မှဦးဆောင်ပေမယ့်သိပ်နောက်ကျ!
Assen အတွက် pedophile အားဖြင့်သေမင်းနှင့်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစစ်မှန်တဲ့ဘာလဲ?
Tags:: ရှေ့နေ, Derk Wiersma, Derk Wiersum, dood, အထူးပြုလုပ်ထားသော, မီဒီယာကောလိပ်ကျောင်း, ခြောငျးမွောငျးသတျဖွတျခွငျး, အသတ်ခံရ
18 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 21: 51
သင်၏ယခင် (အတု) ဖြစ်ရပ်များကိုသင်နောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်ယနေ့သတင်း 18 စက်တင်ဘာလ 2019 ဒီတော့နောက်တဖန်ယုံကြည်ပေသည်။
Hap အဆင်သင့်မျို, ဒါကြောင့်သင် (အတု) သတင်းရှိသည်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သင် (အတု) သတင်းများ၏လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များနားမလည်ဘူးလိုက်နာပါ။
18 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 21: 53
သင်မည်သို့နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်မြေတပြင်လုံးကလူအနေအထားအပေါငျးတို့သအောင်ပြုလုပ်နေဆဲ NOTHING စုံစမ်းစစ်ဆေးနေချိန်တွင်မိမိအအလုပ်အကိုင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြောနိုင်
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့် CPR အကြောင်းကိုဘာမျှမနားထောငျကွပါ
18 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 22: 28
နက်ရှိုင်းသောအတုနည်းပညာနှင့်အတူသင်ပခုံးပေါ်မှာကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူလူတ shoot နိုင်နှင့် (ထုံးစံစကားသံကိုအပါအဝင်) အပေါ် non-တည်ရှိ (သို့သော်လက်တွေ့) အမြင်စည်းကြပ်နိုင်အောင်။
18 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 22: 57
ခြေထောက်၏ dangling လက်ခံမှု mode ကို (NLP hypnosis) ၏ဝိညာဉျကိုဆောင်တတ်၏
19 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 00: 32
အဆိုပါ technique ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရှုပါ:
19 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 08: 19
Little ကရှင်းပြ, ရှိသမျှညာဘက်ထို့နောက်။
လူကိုကျောနဲ့ထွက်ပြေးသောကြီးတွေဝမ်းနှင့်အတူကျန်ရစ်; အရိပ်ညာဘက်နောက်တဖန်ပြီးတော့မကျင့်, ပိုဆိုးအရိပ်မဖြောင့်ရှိတခါတရံဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအိမ်နီးချင်းသည်ကိုယ်တော်တိုင်; အဆိုပါမျက်ခုံး၏ on-သဘာဝအလျောက်လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်
ကောင်လေးက၏ဂျာကင်အင်္ကျီပေါ်မပင်အလင်းရောင်လက်ျာဘက်အရိပ်ထဲမှာအိမ်နီးချင်း၏ဦးခေါငျးကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မှန်ဘီလူးမီးတောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးက backlit ရိုက်ချက်စျေးပေါ junk, ဟက်တာဟက်တာ, အသုံးပြုသည်။
သင် lamppost ၏အရိပ်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါလျှင်ထိုအုတ်ရိုးပေါ်ဗန်၏အရိပ်တစ်ခုမမှန်ကန်ကြောင်းထောင့်ရှိပါတယ်။
မျက်နှာများ၏ခြုံငုံ image ကိုဖွင့်အဓမ္မ geblurred ဒါမြူဆိုင်းဖြစ်ပါသည်, AT5 ဟက်တာဟက်တာ, အခုအချိန်မှာထိပ်တန်းကင်မရာများရှိပါတယ်သော်လည်းမအလွန်အတုထုတ်ကြည့်ပါတယ်။
၏သင်တန်းကိုသင်စမတ်ဖုန်းအပေါ်သိမြင်ပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအကောင်းဆုံး Laptop တစ်လုံးသို့မဟုတ်သင်အနည်းငယ် inzoomed နေလျှင်မရကြဘူး။
18 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 21: 55
အင်တာဗျူးနားထောင်ပါ။ Hiddema တစ်ခုခုမေးလျှင်သည်မီဒီယာအတွက်အဖြေအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
အင်တာဗျူး "ဒါဟာသဲကန္တာရကျွန်းမဖြစ်မနေအားမိမိအသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာသက်သေခံပေးဆောင်ရွက်ပြီးသူရှေ့နေကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်" လို့ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့်အမည်မသိဆက်လက်တည်ရှိစေခြင်းငှါ, မီဒီယာပြီးသား (သူအကြာတွင် wryly အင်တာဗျူးတွင်မှတ်ချက်ချကဲ့သို့) သူ့ကိုအညီ, ကခုန်ပေါသောသရုပ်ဆောင် Hiddema တခုသော authoritative ကြက်သားအဖြစ်, အဆိုပါဟိဂ်ကနေသဘောတူရမယ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်။
မိနစ် 3; 37
18 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 22: 27
နောက်ပိုင်းတွင် '' အလိုအလျောက် '' တစ်ဦးပြစ်ဒဏ်ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။
ပက်ထရီရှာဗန် Oosten wrote:
19 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 08: 41
ကြောင်းဆိမျက်မြင်သူကို Idd သံသယအတွက်ငါ့ကိုလည်းတတ်၏။ မည်သည့်အစစ်အမှန်စိတ်ခံစားမှုကင်းမဲ့။ သငျသညျကိုမျှဝေ misdirection '' ဗီဒီယိုများ၏အနုပညာ "၏လူကြီးလူကောင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်အနုပညာကိုပိုပြီးဤသို့အဆက်မပြတ် cheat စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မကျမည်အကြောင်းအလွန်ကိုရှာဖွေ psychophaten သစ်ကိုဖောက်ကိုယ်စားပြုတယ်။ အစဉ်အဆက်ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် 8e နေ့၌ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုအခြို့သောကြင်နာခြင်းဖြင့်စိတ်ဒဏ်ရာကိုမကြာခဏတစ်ခုကလပ် left-brain ဝါသနာရှင်များ။
ဒါ့အပြင် Hiddema (နှင့် Wiersma) ကနေဆငျးရဲခံရပုံရသည်။ ဒါဟာတာရှည် Hiddema လူဦးရေ (နှင့်ပါလီမန်) ကဖြစ်ရပ်မှန်များပါမယ်ဘာမှ "ရာဇဝတ်မှု" ပွိုင့်မှထွက်ခေါ်ရာဇဝတ်သားကြေငြာတစ်ခုခုဖြစ်မယ့်တစ်ချိန်ကဘယ်မှာရဲပြည်နယ်, ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသင့်ကြောင်းငါ့ထံသို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူအရေးမပါဘူး Baudet သို့မဟုတ် Otten နှင့်အတူရှိမရှိ။ ငါကငါအမှန်တကယ်ကျွန်တော်ယခုနောက်ဆုံးစစ်ပွဲကိုစတင်သောရည်ရွယ်ချက်ကိုယုံကြည်နေသည် '' အားလုံး 'ထိုမှတပါးလုံးဝသူ့ခေါင်ကျော်ပတ်ဝန်းကျင် moccro ကြောင်းရိတ်စေခြင်းငှါသူတို့၏အိပ်ရာအောက်မှာတစ်ဦးသေနတ်ကြီးသားအပေါင်းတို့, အနိမ့်အိုင်ကျူ, ငါ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနားလညျ မွတ်စ်လင်တို့သည်ဣသရေလနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ NWO tje စင်တာနှင့်အတူစောင့်ဆိုင်းရန်မထင်နိုင်။
19 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 13: 06
Mocro မာဖီးယားဂိုဏ်းသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြား AIVD သင်တန်းသားပါဝင်ပါသည်ဘယ် Mocro မာဖီးယားကစားနိုငျသလဲ
19 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 14: 03
ဒါဟာ Madurodam အကြောင်းဖုံးကွယ်ဖို့နည်းနည်းအားထုတ်မှုတကယ််၏ရဲပြည်နယ်, လက်ျာစကားလုံးမဟုတ်ဖြစ်ပါသည်စေသည်။ စစ်အစိုးရ၏တော်တော်လေးနီးစပ်ရဖို့စတင်သည်, အမည်မသိရှေ့နေ, တရားသူကြီး ... အမည်မသိ readymade ခံယူချက်
19 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 16: 55
အလွန်ကညာထွက်ကြည့်ရာ Binder အတွက်စက္ကူ John..maar လှပသောနက်ရှိုင်းသောအတုထုတ်လုပ်မှု။ အဲဒီမှာသင် browse ဘယ်တော့မှသိရသည်။ အံ့သြစရာရုပ်ရှင် ..
19 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 17: 24
ကျနော်တို့အဆင်ပြေ Hegelian ဘဏ်ဍာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံပိုင်သတင်းပေးတစ်ဦးမက်လုံးပေးဖြစ်ကြောင်းသူကကာကွယ်ရှေ့နေ / သတင်းစာဆရာ / သကျသခေံဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော်ကြေးပေးရန်ဒီနေရာကိုမေ့လျော့။ ဒီနေရာမှာအရေးပါတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအတွက်အခွန်ထမ်းများကပေးဆောင်ဘဏ္ဍာရေးလျော်ကြေး။ စိုးစံအိပ်ရ
20 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 07: 25
ပထမဦးစွာကျနော်တို့က Holleeder မာဖီးယားဂိုဏ်းရှိ၏ အခုဆိုရင်ကျနော်တို့က Mocro- သို့မဟုတ် Ridouan Taghi နှင့်အတူ nacromaffia ရှိသည်။ နှစ်ဦးစလုံးရှင်းလင်းစွာ AIVD PSYOP pawn nepmaffia ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍမှခွင့်ပြုခဲ့နေကြပါတယ်။ ဒါဟာအသစ်ကရဲကိုပြည်နယ်အစီအမံများအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက် alkemaal သရုပ်ဆောင်သည်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြေးနန်းအဆောက်အဦများတွင်အတုရှိ၏ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမြင်ကွင်းကျယ်အဆောက်အဦမှာအတုဖြစ်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးအတုဖြစ်ပါတယ်။ ပညတ္တိကျမ်းနှင့် တွဲဖက်. Nepnieuwsproducties မီဒီယာ။ ဥယျာဉ်တော်ပျက်ကွက်! ဒါဟာဂိမ်း၏ဖြေရှင်းချက်ခြေလှမ်းတို့ကရဲကိုပြည်နယ်ခြေလှမ်းထွက်လှိမ့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, တုံ့ပြန်မှုဟာပြဿနာပါ!
20 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 09: 41
ချားလ်စ် Reuterz wrote:
20 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 09: 26
20 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 14: 14
အားလုံးကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာဝေးကထိန်းချုပ်ထားရသည်။ Niburu.co ဥပမာဖရက်ဒီ Heiniken တစ်ဦးဖြစ်သူရည်းစားအားဖြင့် run သည်။ ဒါကပြန်ပေးဆွဲတဲ့ hoax ခဲ့ကြောင်းရေးလိုက်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
ထိန်းချုပ်ရာအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာ 911 အပေါ်အာရုံစိုက်ထားရန်ကြိုးစားကြ; စသည်တို့ကို UFOs အကြောင်းရေးဖို့အမြဲရုံ (က hoax PSYOP ထက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာ) ရေတံခွန်အလံအကြောင်းပြောဆိုရန်။
21 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 16: 56
ဤ site ထပ်တလဲလဲအခြေခံလမ်းမပေါ်တွင်ကြေးနန်းအဆောက်အဦးပေါ်မှတိုက်ခိုက်အတုခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြနှင့် Panorama အဆောက်အဦးပေါ်မှတိုက်ခိုက်ကိုလည်းလုံးဝမေးခွန်းတစ်ခုဆန္ဒပြကြောင်းသိရသည်။ တစ်ဦး antitank လက်ပစ်ဗုံးနောက်ကွယ်မှအဲဒီမှာပြသခြင်းနှင့်သိရပါတယ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုထက်အများကြီးပိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရွက်။
အရှင် (အတုတိုက်ခိုက်မှုနှင့်အတူ) ဆက်စပ်သမျှသောဤ (စွပ်စွဲ) ရာဇဝတ်ကောင်လျှင်, သင် Grapperhaus ကသူ့အိမ်စာကောင်းစွာမလုပ်ခဲ့ဘူးနှင့် Parool သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်ပေါ်အဘယ်အရာကို verify မဆိုနိုငျသညျ။ သူတို့ပြောပေမယ့်သူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုနှင့်ပြည်သူများကိုလိုအပ်မယ့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိပ်အလေးအနက်ထားကယူပါ။
shared ဤဆောင်းပါးကိုမရှိတော့, လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လုံးဝမယ့်ဆရာယောဟနျတောင်ကုန်းများကဲ့သို့ schandknaapjes အားဖြင့်အထဲကသုတ်သည်အဘယ်ကြောင့်, သူ YUCK, ပုပ်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဖြစ်သင့်!
21 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 17: 44
Grapperhaus သည်အခြားအရာနှင့်အလုပ်များဖြစ်ပါသည် ..
21 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 17: 09
တစ်ကျိကျိတက် hoax မှာကျောသပိတ်မှောက် yeah က hoax င်လျှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ရင်မဖြစ်နိုင် (သူတို့သားကောင်ထက်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြကြောင်း ......
ထိုအဆဲရဲတပ်ဖွဲ့အာဏာပိုင်များကထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိသက်သေအထောက်အထားအားလုံး guesswork အဲဒီမှာဟုခေါ်သည်
21 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 17: 47
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး VenJ နဲ့ OM အဆိုပါ zorregieta မိသားစုထံမှအချို့သောအကြံပေးချက်များသည်ခံရကြပြီ။ မြေတပြင်လုံးကို set up နဲ့ကမျက်စိ prying ဤအမှုကိုပြုလုပ် psyop အသစ်ကဥပဒေပြဌာန်းသောအရာကိုဖြစ်သွား unravels ကြောင့်ကြောက်လန့်သည်းခံမည်မဟုတ်ကြောင်းထပ်မံသက်သေအထောက်အထား။ သူ Grapperhaus ချက်ချင်း unpacked ဘယ်လိုအရူး🙂
24 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 15: 01
Pablo Escobar အခြားပြီးနောက်, (သူတည်ရှိလျှင်) ~ တဦးတည်းသရုပ်ဆောင် tagi ၏ကြိုးကိုချည်နှောင်သင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကုန်ကျစခွေငျးငှါအဘယျသို့ကယျပြပွဲ,!
24 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 20: 33
ထိုသို့သောကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်များကို, တရားစီရင်ရေးစနစ်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တူ, ဒါပေါ်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းစေနှင့်
အဘယ်သူမျှမကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ပြစ်မှုထင်ရှားလျက်ရှိသည်စဉ်ပင်အဘယ်သူမျှမသံသယရှိသူဘာမှဘာမျှဘာမျှမသေး Baute ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
motif ပေမယ့်သားကောင်များ၏ 1 လိုက်တယ်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူမီဒီယာ, သားကောင်များကိုသာသုံးဓာတ်ပုံတွေနဲ့ခင်းကျင်းပြသခြင်းဖြင့်ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။
အဘယ်မှာရှိတရားကိုကျင့်သောဤနှိပ်မေးခွန်းမှ NL အတွက်ရှေ့နေများများမှာ!
28 မှ 2019 စက်တင်ဘာလ 17: 31
လက်ျာဘက်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးနေရာချ, တစ်အိမ်နီးချင်း 07 မှာသူမ၏နှိုးဆော်သံကဆိုပါတယ်သောအွန်လိုင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်: 33 ချွတ် သွား. , သူတို့လည်းရိုက်ချက်များကြားလျှင် ... ..
ဒါ့အပြင်တဦးတည်းဆေးလုံးကိုအသုံးသူတွေကို Grapperhaus အဖြစ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့သိပ်ဒတျချြသည်းခံစိတ်မူဝါဒအဘို့ ... ..
အမည်မသိဖြစ်နေဆဲသူကိုသစ်ကိုရှေ့နေအဖြစ်ခန့်အပ်ယခုရှိပါသည်။ ဒါ့အပြင်တရားသူကြီးများနှင့်အစိုးရရှေ့နေများအနာဂတ်၌အမည်မသိဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါ။ မည်သူမဆို gagged ရပါမည်ဆိုပါက, ဒါမှသာအမည်မသိတရားစွဲဆိုမှုအတွက်လူတစ်ဦးကွိုးစားပါနှင့်ထောင်ဒဏ်ပစ်ခြင်းငှါဖြစ်မယ့်ခြိမ်းခြောက်မှုတီထွင်ကြဘူး ....
8 မှအောက်တိုဘာလ 2019 19: 18
ဟုတ်ပါတယ် Rode Hoed မှာပျူငှါနွေးထွေးသောသောက်စားခြင်းနှင့်တရားသူကြီးများ၊ ရှေ့နေများနှင့်၊ အစိုးရရှေ့နေများနှင့်အခြားဝတ်ရုံများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသိသည်။
ဤမှတ်ချက်သည်အခကြေးငွေအလုံအလောက်ဖော်ပြသည် -“9ရှိ 11 / 2001 သည်ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း၊ ထိုကဲ့သို့သောမှတ်တိုင်တစ်ခုကဒတ်ခ်ျဥပဒေရေးရာအမိန့်အတွက်အသုံးချခြင်းကြောင့်ရှေ့နေတစ် ဦး ကိုသတ်ခြင်းဖြစ်သည်”
8 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 14
သို့မဟုတ်ပါကစာအုပ်သည်ကုလားကာကိုအပြည့်အ ၀ တင်ထားလိမ့်မည်။
HEINEKEN ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရဖူးသူ၏မျက်မှန်ရှင်းလင်းချက်ကိုတောင်းပါ LE ရွှင်လန်းမှု
မိန့်ခွန်းအီရတ်စစ်ပွဲ "Incubator ထဲကပစ်ချကလေး" ၏ဆင်တူ Greta Thunberg ကုလမိန့်ခွန်း »